News – MKK Business Group
+95-9-250694575 / +95-9-448540326 / +95-9-960679711 / +95-9-960679712
Ottara Sales (Owner Direct)
နောက် ဆုံးရ သတင်း- နေပြည်တော်
ရန်ကုန်မိုးပျံရထားလမ်း ပထမပိုင်းကို ၂၀၂၇ ခုနှစ်တွင် အပြီးတည်ဆောက်မည်
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးရဲမင်းဦးသည် Bayan Tree Co.,Ltd မှ ACASYS Industrialized Building System(ACASYS IBS) နည်းပညာဖြင့် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအတွက် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများဆောက်လုပ်နိုင်ရေးနှင့် စီမံကိန်း အဆိုပြုလွှာနှင့်ပတ်သက်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့် အခမ်းအနားကို ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက နေပြည်တော်မြို့တော်ခန်းမရှိ အစည်းအဝေးခန်းမတွင်ကျင်းပခဲ့ရာ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကို နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးရဲမင်းဦး၊ ကော်မတီဝင် ဦးဆန်းနိုင်၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမျိုးအောင်၊ ဌာနကြီးမှူး ဦးတင်အောင်ငွေ၊ ဌာနမှူးများ၊ တာဝန်ရှိသူများ၊ Bayan Tree Co.,Ltd မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ကြသည်။ပထမဦးစွာ ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးရဲမင်းဦးမှ အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး Bayan Tree Co.,Ltd မှ ACASYS Industrialized Building System(ACASYS IBS) နည်းပညာဖြင့် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအတွက် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများဆောက်လုပ်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာ သူများမှ သိရှိလိုသည်များကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြပြီး အခမ်းအနားပြီးစီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအဖြစ် စတင်ဆောက်လုပ်မည့် ရန်ကုန်မိုးပျံရ ထားလမ်း ပထမပိုင်းကို ၂၀၂၇ ခုနှစ်တွင် အပြီးတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင်လ ၂၆ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ရန် ကုန်မိုးပျံရထားလမ်း စီမံကိန်း ၏ လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ပြလူထုရထား ပို့ဆောင် ရေးစီမံကိန်း (YUMRT) ဟု အမည် ပေးထားသော ရန်ကုန် မိုးပျံရ ထားလမ်း စီမံကိန်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ အရှေ့- အ နောက်ပိုင်းကို လှိုင်သာယာ- တောင်ဒဂုံ မြို့နယ် တိုးကြောင် က လေးနှင့် ရန်ကုန် တောင်- မြောက်ပိုင်းကို ဒလမြို့နယ်- ဘူတာကြီး-မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်လမ်းပိုင်း နှစ်ခုအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန် ကြီးဌာနက ကြေညာထားပြီး ရန်ကုန်မြို့ အရှေ့- အနောက်ပိုင်းကို ဆက်သွယ် သည့် လမ်းပိုင်းအား ဦးစွာတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ စီမံကိန်း တစ်ခုလုံးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ ODAချးငွေပေးအပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ စီမံကိန်းအတွက်က အ သေးစိတ်လေ့လာမှုကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးအေဂျင်စီ(JICA) ကစတင်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်ကုန်၌ လေ့လာမှုပြီးဆုံးမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လာမည့် ၂၀၂၁ခုနှစ် တွင် ပထမပိုင်း တည်ဆောက်မှုကို စတင် မည်ဖြစ်ကာ လာမည့် ၂၀၃၅ခုနှစ် တွင် စီမံ ကိန်းတစ်ခုလုံး ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်……………
နေပြည်တော် - ရင်းနှီးမြှုပ်မှု
နေပြည်တော် မှာ ရင်းနှီးမြုပ် နှံ မှု တစ်ခု ပြု လုပ်ပါ ။
- မြန်မာနိုင်ငံ ရှိမြို့ ကြီးများအနက် နေပြည်တော် သည် ၀န်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ ရုံး များတည်ရှိရာ မြို့ ဖြစ်ပြီး သွားလာရန် လမ်းများ ကျယ်ဝန်းကောင်းမွန် လှပါသည်..။
- လူနေအိမ် များမှာ - ၀န်ထမ်းများ အတွက် သေသပ်လှပ ခန့် ညား သော တိုက်ခန်းများနှင့် လူနေအိမ် ခြံမြေ များမှာ လည်း ကျယ်ဝန်း သန့်ရှင်း လှပါတယ်..။
- နေပြည်တော် မှာ ရှိတဲ့ အိမ်ခြံ မြေ တွေ ဟာ အကျယ် အ၀န်း အားဖြင့် အနည်း ဆုံး ၆၀×၄၀ ရှိပြီး ပုံ မှန် အားဖြင့် ၆၀×၆၀ ပတ်လည် ၊ ၆၀×၈၀ ၊ ၈၀×၈၀ ၊ ၆၀×၁၀၀ ၊ ၁၀၀×၁၀၀ ပတ် လည် ၊ ၁၅၀×၁၅၀ ပတ်လည် နှင့် ၂၀၀×၂၀၀ ပတ် လည် ဆိုပြီး ရှိကြ ပါ တယ်..။ - နေပြည်တော် သည် ခရိုင် ၂ ခု နှင့် မြို့ နယ် ၈ မြို့နယ် ရှိ ပြီး ဆက်သွယ် သွားလာ ရေး ကောင်းမွန် လှပါတယ်..။ - လမ်းများ ကျယ်ဝန်ပြီး သွားလာရန် အတွက် အရမ်း ကို အဆင်ပြေ လှ ပါ တယ်..။မိမိ သွားလို့ တဲ့ နေရာ ကို အချိန်မှီ အချိန် ကိုက် သွား လို့ ရပါတယ်..။ လမ်းများ ကျယ်ဝန်းသလို ကားများ နည်းလွန်း တဲ့ အတွက် ယာဉ်ကြော ကြပ်တည်းမှု မရှိပါဘူး.။
- မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ရှိကြ တဲ့ ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး နှင့် အခြားမြုိ့တွေ မှာ ဆိုရင် အိမ်ခြံ မြေ ဈေးဟာ အင်မတန် ဈေးမြင့် လွန်းတဲ့ ပြီး သာမန်လူတန်းစား များအတွက် အိုးပိုင် အိမ်ပိုင် ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ကူ လှ ပါဘူး..။
- အဲဒီလို မြို့ ကြီးများနှင့် ယှဉ်လိုက်ရင် နေပြည်တာ် အိမ်ခြံ မြေဈေး သည် ၄၀×၆၀ တစ်ကွက် ကို အနညးဆုံးဈေး သိန်း ၅၀ (ပုပ္ပသီရိမြို့ နယ်) မှာ ရပါတယ်..။ ဒီလို ၄၀×၆၀ သိန်းဆိုတာ ဘယ်မြို့ မှာ မှ မရ နိုင်ပါဘူး .။
- ထို့ အတူ - မြေ အကျယ် ၆၀×၆၀ ပတ်လည် ၊ ၆၀×၈၀ ၊ ၈၀×၈၀ ၊ ၆၀×၁၀၀ ၊ ဆိုရင် သိန်း ၂၉၀ မှ သိန်း ၅၀၀ ~ ၇၅၀ ကြား အထိ ပဲ ရှိကြ ပါတယ်..၊၊ ဒါ တောင် တစ်ချို့ အိမ်တွေ ဟာ နေလို့ ရတဲ့ အထိ တော် တော် သန့် သန့် လေး ရှိကြ ပါတယ်..။ စီးပွားရေး လုပ်ရန် နေရာ ကောင်းပြီး ဈေး ၁၀၀၀ ၀န်းကျင် မှ အထက် - ပေးရတဲ့ နေရာ တွေ လည်းရှိပါတယ်.။ လုနေရန် အတွက်ကတော့ အထက် က ပြော ခဲ့ သလို့ ဈေးတန်လွန်း လှပါတယ်.။
- မီးအားကောင်းြ့ပီး ပုံမှန် မီးလာ နေတာ ကြောင့် - တီဗီက လာ တဲ့ အစီအစဉ်တွေ ကို ရုံးပိတ်ရက် တွေ မှာ မနားတမ်း ကြည့် နိုင်ပါတယ်..။ .. - ဒီလို- ဈေးသက်သာပြီး ခြံ ကျယ်ကျယ် ၀န်း ၀န်းတွေ ရဲ့ အနား မှာ စူပါမားကက်ကြီးတွေ နဲ့ ဈေး ကျောင်း ဟိုတယ်ကြီး တွေ ရှိကြပါတယ်..။
- ၀န်ထမ်းများ နေတဲ့ မြို တော် ဖြစ်တဲ့ အတွက် လူနေမှု ကောင်းမွန်လှပြီး .. ကျယ်ဝန်းလှ တဲ့ ခြံ တွေ ကြောင့် ... နေပြည်တော် မှာ နေထိုင်ကြ တဲ့ သူ အများစု ဟာ ကိုယ်ပိုင် ခြံ ၀န်းနဲံ့  ဈေး သက်သာ စွာ အလွယ် တကူ ၀ယ် ယူ နေထိုင် နိုင်ကြ ပါတယ်..။ ..။
- အထက် က ဖေါ်ပြ ခဲ့ သလို ဈေး သိန်း ၂၉၀ မှ သိန်း ၅၀၀ ~ ၇၅၀ ဆိုတာ ရန်ကုန် နဲ့ မန္တလေးမှာ ဆိုရင် .. ၂၀×၆၀ ထက် ပို ပြီး ခြံ ကျယ်ကျယ် ၀ယ် လို့ ရနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး..။ - ဒါ ကြောင့် ယခု နောက် ပိုင်း မှာ ဆိုရင် ဖြစ် ရန်ကုန် က လူတစ်ချို့ ဟာ မိမိ ပိုင် အိမ်ခြံမြေ များကို ဈေး ကောင်းရ လို့ ရောင်းကာ နေပြည်တော် ဘက် ကို ဦးတည် အခြေ ချ နေ ထိုင် လာ ခဲ့ ကြ ပါတယ်..။
- ခု လို ကပ်ရောဂါ ကာ မှာ စီးပွားရေး ကျလာ တာ နှင့် အမျှ မြို့ ပေါ် က အိမ် ကို ရောင်းချကာ နေပြည်တော် မှာ ရှိတဲ့ ကျယ်ဝန်းဈေးသက်သာ ပြီး - လူနေ သန့် တဲ့ ရပ် တွေ မှာ ၀ယ်ယူ အခြေချ နိုင်ထိုင်လာ ကြပြီး - ငွေ ပို ငွေ လျှံ များကို မိမိ တို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေ မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ မှု တွေ ပြု လုပ်ကြ ပါတယ်..။ - အဲ ဒီ လို စီးပွားရေး လုပ်နိုင်ကြ တဲ့ အတွက် သူတို့ မိသားစု တွေ စီးပွားရေး တွေ ပို အဆင် ပြေ လာ ကြ သလို့ လူနေမှု လည် အရင်ကထက် ပိုမို စည်ကားလာ ပါတယ်..။
- နေပြည်တော် က အိမ်ခြံ မြေ ဈေးကွက် ဟာ အခြားမြို့ များနှင့် နိုင်းယှဉ် လျှင် ဈေးသက်သာ လှပါတယ်..။ရင်းနှီးမြုပ် နှံ သူတွေ အနေ နဲ့ နေပြည်တော် မှာ ကျယ်ဝန်း ပြီး လေကောင်းလေသန့် ရတဲ့ နေ ရာ လေးတွေ ကို ခု လို ဈေး သက်သာ လှ တဲ့ အချိန်မှာ ၀ယ်ယူ ပြီး ရင်း နှီး မြုပ် နှံ မှု တစ် ခု ပြု လုပ်သင့် ပါ တယ်..။ - ဒါ ဟာ ရင်း နှီးမြုပ်နှံ မှု ပြု လုပ် လိုသူများ အတွက် ကောင်းသလို မိသားစု နေထိုင်ရန် အတွက်လည်း အင်မတန်မှ ကောင်းမွန် လှ ပါတယ် ..။နောင် တစ် ချိန် မှာ ယခု ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ ဈေးနဲ့ ဘယ်လို မှ မရနိုင်ပါဘူး..။
- လက်ထဲ မှာ ငွေ ပို လျှံ ရှိနေတဲ့ သူတွေ အတွက်က တော့ .... . ခြံ ကျယ် အကွက် လှ နေရာ ကောင်းပြီး ၀ယ်ဈေး ချောင်တဲ့ နေရာ လေးတွေ ရနိုင်မယ် ဆိုရင် နေပြည်တော် မှာ ၀ယ်ယူရင်းနှီး ထားပါက နောင် အနာဂါတ်စီးပွားရေး အတွက် မမှားနိုင်သော ရင်း နှီး မြုပ် နှံမှု တစ်ခု ပါ ပဲ ..။
- အချုပ် အားဖြင့် ဆိုရသော်.. ခု လို စီးပွားရေး ကြပ်တည်းလှ တဲ့ ကာ လ မှာ ဘာ လုပ် လို့ လုပ်ရမည် မသိ ဖြစ်နေကြ သူများ အတွက် တော့ - ငွေပိုနေတယ် ဆိုရင် - - ဒီလို ကာ လသည် အခြားရင်းနှီးမြုပ် နှံမှု ထက် စာရင် - ခြံ ကျယ် အကွက် လှ နေရာ ကောင်းပြီး ၀ယ်ဈေး ချောင်တဲ့ နေရာ လေးတွေ ရနိုင်မယ် ဆိုရင် ၀ယ်ယူ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပြုလုပ် သင့် ပါကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်...။
ကိုဗစ်ကာလ ပထမ ပိုင်းမှာ နေပြည်တော် က အိမ်ခြံ မြေ ရောင်းအားဟာ သိသိသာ အားကောင်းလာခဲ့ ပါတယ်..။ အားကောင်းလာတာနဲ့ အမျှ - မြေ ဈေးတွေလည်း သိသိသာသာ တက်သွားပါတယ်။
-သို့ သော် - ဒုတိယ လှုင်းလို့ ပြော ကြတဲ့ - ဒုတိယ အကြိမ် ကိုဗစ်မှာ တော့ - လေကြောင်းလိုင်းတွေ ၊ ကားလမ်းတွေ ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ ပိတ် လိုက် အတွက် - နေပြည်တော် အိမ်ခြံ မြေ ဈေးကွက် ဟာ ၃ လ နီးပါးလောက် အေးစက် တည်ငြိမ်သွားပြပါတယ်..။
-နေပြည်တော် အိမ်ခြံ မြေ ဈေးကွက် ဟာ - ၀ယ်ရောင်းတည်ငြိမ်းသွား သော်လည်း မြေ ဈေးဟာမကျဘဲ အတက် သာရှိနေသည်.။
-ယခု ဒီဇင်ဘာလ မှ စတင်ကာ နေပြည်တော်အိမ်ခြံ ၀ယ်ရောင်း ဈေးကွက် အရင်က ထက် ပိုမို အ ရောင်းသွက်လာသည်. ကို တွေ့ ရပါသည်.။
-လေကြောင်း လိုင်း နှင့် ကားလမ်း တွေ ပြန်ဖွင့် လျင် ဒိ ထက် ပို ပြီးရောင်းအားကောင်းလာနိုင်ဖွယ်ရှိ သည်.။
-မြန်မာနိုင်ငံ ရှိမြို့ ကြီးများအနက် နေပြည်တော် သည် ၀န်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ ရုံး များတည်ရှိရာ မြို့ ဖြစ်ပြီး သွားလာရန် လမ်းများ ကျယ်ဝန်းကောင်းမွန် လှပါသည်..။
-လူနေအိမ် များမှာ - ၀န်ထမ်းများ အတွက် သေသပ်လှပ ခန့် ညား သော တိုက်ခန်းများနှင့် ပြင်ပ လူနေအိမ် ခြံမြေ များမှာ လည်း ရန်ကုန် မန္တလေး နှင့် အခြားမြို့ များ ထက်ပင် ပိုမို ကျယ်ဝန်း သန့်ရှင်း လှပပြီး ဈေး သက်သာ လှပါတယ်..။
-နေပြည်တော် မှာ ရှိတဲ့ အိမ်ခြံ မြေ တွေ ဟာ အကျယ် အ၀န်း အားဖြင့် အနည်း ဆုံး ၆၀×၄၀ ရှိပြီး ပုံ မှန် အားဖြင့် ၆၀×၆၀ ပတ်လည် ၊ ၆၀×၈၀ ၊ ၈၀×၈၀ ၊ ၆၀×၁၀၀ ၊ ၁၀ ၀×၁၀၀ ပတ် လည် ၊ ၁၅၀×၁၅၀ ပတ်လည် နှင့် ၂၀၀×၂၀၀ ပတ် လည် ဆိုပြီး ရှိကြ ပါ တယ်..။
နေပြည်တော် သည် ခရိုင် ၂ ခု နှင့် မြို့ နယ် ၈ မြို့နယ် ရှိ ပြီး ဆက်သွယ် သွားလာ ရေး ကောင်းမွန် လှပါတယ်..။
-လမ်းများ ကျယ်ဝန်ပြီး သွားလာရန် အတွက် အရမ်း ကို အဆင်ပြေ လှ ပါ တယ်..။မိမိ သွားလို့ တဲ့ နေရာ ကို အချိန်မှီ အချိန် ကိုက် သွား လို့ ရပါတယ်..။ လမ်းများ ကျယ်ဝန်းသလို ကားများ နည်းလွန်း တဲ့ အတွက် ယာဉ်ကြော ကြပ်တည်းမှု မရှိပါဘူး.။
-မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ရှိကြ တဲ့ ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး နှင့် အခြားမြုိ့တွေ မှာ ဆိုရင် အိမ်ခြံ မြေ ဈေးဟာ နေပြည်တော်ထက်ပင် - အင်မတန် ဈေးမြင့် လွန်းတဲ့ ပြီး သာမန်လူတန်းစား များအတွက် အိုးပိုင် အိမ်ပိုင် ဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ကူ နိုင်ပေ..။
-အဲဒီလို မြို့ ကြီးများနှင့် ယှဉ်လိုက်ရင် နေပြည်တာ် အိမ်ခြံ မြေဈေး သည် ၄၀×၆၀ တစ်ကွက် ကို အနညးဆုံးဈေး သိန်း ၆၀ (ပုပ္ပသီရိမြို့ နယ်) မှာ ရပါတယ်..။ ဒီလို ၄၀×၆၀ အကျယ်မှာ သိန်း၆၀ ကျော် ဆိုတာ ဘယ်မြို့ မှာ မှ မရ နိုင်ပါဘူး .။
-ထို့ အတူ - မြေ အကျယ် -ယခင်က ၂၅၀ လောက်သာရှိခဲ့ သော်လည်း ( ရွှေကြာပင် - ၆၀×၆၀ ပတ်လည်- ၃၅၀ လောက် ရှိပါတယ် - ယခု ဈေး ) ထိရောက်ရှိခဲ့ပါ ပြီ ၊ ၆၀×၈၀ ၊ ၈၀×၈၀ ၊ ၆၀×၁၀၀ ၊ ဆိုရင် - သိန်း ၃၇၀ -၄၀၀- ၅၀၀ ~ ၇၅၀ ကြား အထိ ပဲ ရှိကြ ပါတယ်..၊၊ ဒါ တောင် တစ်ချို့ အိမ်တွေ ဟာ နေလို့ ရတဲ့ အထိ တော် တော် သန့် သန့် လေး ရှိကြ ပါတယ်..။
-စီးပွားရေး လုပ်ရန် နေရာ ကောင်းပြီး ဈေး ၁၀၀၀ ၀န်းကျင် မှ အထက် - ပေးရတဲ့ နေရာ တွေ လည်းရှိပါတယ်.။ လုနေရန် အတွက်ကတော့ အထက် က ပြော ခဲ့ သလို့ ဈေးတန်လွန်း လှပါတယ်.။
-ရေ နဲ့ မီးအားကောင်းြ့ပီး ပုံမှန် မီးလာ နေတာ ကြောင့် - တီဗီက လာ တဲ့ အစီအစဉ်တွေ ကို ရုံးပိတ်ရက် တွေ မှာ မနားတမ်း ကြည့် နိုင်ပါတယ်..။ ..
-ဒီလို- ဈေးသက်သာပြီး ခြံ ကျယ်ကျယ် ၀န်း ၀န်းတွေ ရဲ့ အနား မှာ စူပါမားကက်ကြီးတွေ နဲ့ ဈေး ကျောင်း ဟိုတယ်ကြီး တွေ ရှိကြပါတယ်..။ဘယ်ကို သွာ သွား နေအိမ် စူပါ မားကက်ကြီးတွေ ကို အချိန် တို အတွင်းမှာ ရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.။
-၀န်ထမ်းများ နေတဲ့ မြို တော် ဖြစ်တဲ့ အတွက် လူနေမှု ကောင်းမွန်လှပြီး .. ကျယ်ဝန်းလှ တဲ့ ခြံ တွေ ကြောင့် ... နေပြည်တော် မှာ နေထိုင်ကြ တဲ့ သူ အများစု ဟာ ကိုယ်ပိုင် ခြံ ၀န်းနဲံ့  ဈေး သက်သာ စွာ အလွယ် တကူ ၀ယ် ယူ နေထိုင် နိုင်ကြ ပါတယ်..။
-အထက် က ဖေါ်ပြ ခဲ့ သလို-ရွှေကြာပင် - မြို့ အလယ်မှာ - ဈေး သိန်း ၃၅၀ မှ ၄၀၀ သိန်း ၅၀၀ ~ ၇၅၀ ဆိုတာ ရန်ကုန် နဲ့ မန္တလေးမှာ ဆိုရင် .. ၂၀×၆၀ ထက် ပို ပြီး ခြံ ကျယ်ကျယ် ၀ယ် လို့ ရနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး..။
-ဒါ ကြောင့် ယခု နောက် ပိုင်း မှာ ဆိုရင် ဖြစ် ရန်ကုန် က လူတစ်ချို့ ဟာ မိမိ ပိုင် အိမ်ခြံမြေ များကို ဈေး ကောင်းရ လို့ ရောင်းကာ နေပြည်တော် ဘက် ကို ဦးတည် အခြေ ချ နေ ထိုင် လာ ခဲ့ ကြ ကို တွေ့ ရပါတယ်..။
-ခု လို ကပ်ရောဂါ ကာ မှာ စီးပွားရေး ကျလာ တာ နှင့် အမျှ - မြို့ ပေါ် က အိမ် ကို ရောင်းချကာ နေပြည်တော် မှာ ရှိတဲ့ ကျယ်ဝန်းဈေးသက်သာ ပြီး - လူနေ သန့် တဲ့ ရပ် တွေ မှာ ၀ယ်ယူ အခြေချ နိုင်ထိုင်လာ ကြပြီး - ငွေ ပို ငွေ လျှံ များကို မိမိ တို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေ မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ မှု တွေ ပြု လုပ်ကြ ပါတယ်..။
-အဲ ဒီ လို စီးပွားရေး လုပ်နိုင်ကြ တဲ့ အတွက် သူတို့ မိသားစု တွေ စီးပွားရေး တွေ ပို အဆင် ပြေ လာ ကြ သလို့ လူနေမှု လည် အရင်ကထက် ပိုမို မြင့်မား စည်ကားလာ ပါတယ်..။
-နေပြည်တော် က အိမ်ခြံ မြေ ဈေးကွက် ဟာ အခြားမြို့ များနှင့် နိုင်းယှဉ် လျှင် ဈေးသက်သာ လှပါတယ်..။ရင်းနှီးမြုပ် နှံ သူတွေ အနေ နဲ့ နေပြည်တော် မှာ ကျယ်ဝန်း ပြီး လေကောင်းလေသန့် ရတဲ့ နေ ရာ လေးတွေ ကို ခု လို ဈေး သက်သာ လှ တဲ့ အချိန်မှာ ၀ယ်ယူ ပြီး ရင်း နှီး မြုပ် နှံ မှု တစ် ခု ပြု လုပ်သင့် ပါ တယ်..။
-ငွေ ပို ငွေ လျှံ ရှိသူတွေ အတွက် တော့ ဒီ အချိန်ဟာ ၀ယ်ယူရန် အသင့် ဆုံး အချိန် ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုချင်ပါတယ်..။
-ဒါ ဟာ ရင်း နှီးမြုပ်နှံ မှု ပြု လုပ် လိုသူများ အတွက် ကောင်းသလို မိသားစု နေထိုင်ရန် အတွက်လည်း အင်မတန်မှ ကောင်းမွန် လှ ပါတယ် ..။နောင် တစ် ချိန် မှာတော့ ယခု ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ မြေဈေးနဲ့ ဘယ်လို မှ မရနိုင်ပါဘူး..။
-လက်ထဲ မှာ ငွေ ပို လျှံ ရှိနေတဲ့ သူတွေ အတွက်က တော့ .... . ခြံ ကျယ် အကွက် လှ နေရာ ကောင်းပြီး ၀ယ်ဈေး ချောင်တဲ့ နေရာ လေးတွေ ရနိုင်မယ် ဆိုရင် နေပြည်တော် မှာ ၀ယ်ယူရင်းနှီး ထားပါက နောင် အနာဂါတ်စီးပွားရေး အတွက် မမှားနိုင်သော ရင်း နှီး မြုပ် နှံမှု တစ်ခု ပါ ပဲ ..။
-အချုပ် အားဖြင့် ဆိုရသော်.. ခု လို စီးပွားရေး ကြပ်တည်းလှ တဲ့ ကာ လ မှာ ဘာ လုပ် လို့ လုပ်ရမည် မသိ ဖြစ်နေကြ သူများ အတွက် တော့ - ငွေပိုနေတယ် ဆိုရင် ဒီလို ကာ လသည် - အခြားရင်းနှီးမြုပ် နှံမှု ထက် စာရင် ခြံ ကျယ် အကွက် လှ နေရာ ကောင်းပြီး ၀ယ်ဈေး ချောင်တဲ့နေရာ လေးတွေ ရနိုင်မယ် ဆိုရင် ၀ယ်ယူ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပြုလုပ်သင့် ပါကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်...။
- Mkk Realestate Mkk Realestate Mkk Realestate
- Pobba Ayar Waddy Realestate
MKK Business Group..
ငွေ ပို ရှိလို့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပြုလုပ်ချင်ပါတယ် ဆိုလျင်ဖြင့် - ကျွန်တော် တို့ ကုမ္ပဏီ သို့ ပိတ်ရက် မရှိ လာရောက် ဆက်သွယ် နိုင်ပါတယ်..။
Pa.196, Thapyae Gone Shop House, Nearly by Khine Li Restaurant, Ingine Street, Nay Pyi Taw.
© 2022 MKK Business Group